Isbaanishku wuxuu wajahayaa dhamaadka nolosha waxtarka leh ee beeraha dabaysha | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | | Awoodda dabaysha, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Sababtoo ah Isbaanish, xilligii dowladdii hore ee PSOE ee uu la jiray José Luís Zapatero, waxay lahayd kor u kac xagga tamarta la cusboonaysiin karo, hadda waa mid ka mid ah waddammada ugu horreeya adduunka ee wajaha dhamaadka nolosha waxtarka leh ee beeraha dabaysha.
Marawaxadaha dabayshu waxay leeyihiin celcelis ahaan nolol waxtar leh oo qiyaastii ah 20 sano. Isbaanishka, ku dhowaad kalabar 23.000 MW oo hadda ku rakiban waddanka waxay ka badnaan doontaa 2025 sano jiritaan 20, taas oo ah nolosha waxtarka leh ee markii hore looga fikiray xarumahan. Ma mudan tahay in la kordhiyo nolosha waxtarka leh ee marawaxadaha dabaysha ama miyay tahay in la cusboonaysiiyo arsenal oo dhan?
1 Nolol waxtar leh ee marawaxadaha dabaysha
2 Waa inaad go'aan gaarto
Nolol waxtar leh ee marawaxadaha dabaysha
Shirkadaha iyo khabiirada kaqeyb galaya shirkii lagu qabtay todobaadkan magaalada Madrid, iyada oo uu hogaaminayo Asociación Empresarial Eólica (AEE), kordhinta nolosha beeraha dabaysha ayaa ah ikhtiyaar aad u macquul ah.
Kulanku wuxuu qaatay dhowr maalmood waxaana laga wada hadlay casharadii kala duwanaa ee laga bartay kordhinta nolosha waxtarka leh ee beeraha dabaysha. Sidoo kale, waxaa jiray dood ku saabsan habraacyada si loo go'aamiyo nolosha waxtarka leh ee beeraha dabaysha loo maro jilitaanka, hababka ansaxinta qaab dhismeedka, xaddidaadda iyo faa'iidooyinka moodellada aeroelastic ama arrimaha ugu waaweyn ee saameeya nolosha haray ee jardiinooyinka.
Si loo dheereeyo nolosha beeraha dabaysha, waxaa lagama maarmaan ah in la ballaariyo heshiisyada cusub iyo moodooyinka waxqabadka. Intaas waxaa sii dheer, waxaa lagama maarmaan ah in tikniyoolajiyadda ay is beddeleyso oo ay baareyso dhibaatooyinka ka dhalan kara.
Waa inaad go'aan gaarto
Waqtigan xaadirka ah wadankeena waxaa jira 20.292 marawaxadaha dabaysha oo lagu rakibay 1.080 beerood dabaysha ah, oo wadarta guud ka badan 23.000 MW. Marka la gaaro 2020, ku dhowaad kalabar marawaxadahaas dabaysha ah waxay gaaraan da 'u dhigma ama ka weyn 15 sano, kuwaas oo in ka badan 2.300 MW ay ka badnaan doonaan 20 sano.
Waa lagama maarmaan in la gaaro go'aanno deg deg ah, maadaama Spain ay tahay inay ilaaliso soo saarista tamarta dabaysha xaddiga u dhigma ama ka sarreeya kan aan maanta haysanno, haddii aan dooneyno inaan u hoggaansano qawaaniinta Yurub oo aan Spain u horseedno kala-guur xagga tamarta ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Isbaanishku wuxuu wajahayaa dhamaadka nolosha waxtarka leh ee beeraha dabaysha
Jarmal waad salaaman tahay!
Halkeen kala tashan karaa xogta ku saabsan da'da awoodda la rakibay ee dabaysha Isbaanishka?
Aad baad u mahadsantahay !!
Spain waxay hagaajisay tayada hawadeeda sanadka 2016